5 वायु प्रदूषण अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रभावहरू - BreatheLife2030
नेटवर्क अपडेट / वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका / 2019-07-03
5 वायु प्रदूषणको अन्तर्गत मान्यता प्राप्त प्रभावहरू:
यो लेख पहिलो विश्व संसाधन संस्थानमा प्रकट भएको थियो वेबसाइट.
वायु प्रदूषणमा बढ्दो विश्वव्यापी ध्यान को अधिकांश प्रभावहरु मा ओजोन, कणग्रस्त पदार्थ र अन्य प्रदूषकहरु लाई प्रभावित गर्दछ मानव स्वास्थ्य। यो प्राकृतिक हो; हेडलाइनहरूमा संख्या हटेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) अनुमान गर्दछ कि घर भित्र भित्र र बाहिर वायु प्रदूषण बारेमा को लागी जिम्मेवार छ7मिलियन समय भन्दा पहिले नै विश्वव्यापी मृत्यु। यी मौतहरु को अधिकांश - 4.2 मिलियन - परिवेश (आउटडोर) प्रदूषण संग सम्बन्धित छ। यो विश्वव्यापी शहरी र ग्रामीण जनसंख्यालाई असर गर्ने एक प्रमुख पर्यावरणीय जोखिम कारक हो।
स्वास्थ्य नतिजाहरूको सार्वजनिक जागरूकता बढ्दै उत्प्रेरित हुन्छ, तर हामीले हाम्रो ग्रह र आफुलाई के वायु प्रदूषण गरिरहेको छ भन्ने ठूलो तस्वीरलाई हेर्न आवश्यक छ। वायु प्रदूषणको सामाजिक लागत- र यसलाई कम गर्न सामाजिक लाभहरू - स्वास्थ्य भन्दा बाहिरको विस्तार, जलवायु, पानी, अक्षय ऊर्जा र कृषि सहित।
वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यलाई असर गर्छ
अधिकतर व्यक्तिलाई थाहा छ कि उनीहरूले कति दिनको पानी तिर्नुपर्छ-प्रति दिन आठ चश्मा, वा2लीटरको बारेमा। तर के तपाईं जान्नुहुन्छ कि तपाई साँच्चै हावा हावा गर्नुहुन्छ?7देखि 8 लीटर हावा को बारे मा वयस्क एथल्स र एक्सहल्स प्रति मिनेट जबकि आराम मा। त्यो प्रति दिन 11,000 लिटर हवाको बारेमा न्यूनतम छ।
गन्दा हावाको स्वादले फेफड़ों भन्दा धेरै असर गर्छ र समयमै मृत्यु भन्दा बढि बढाउँछ। वायु प्रदूषणले शरीरमा लगभग हरेक अंगलाई असर गर्छ। A हाल अध्ययन अन्तरराष्ट्रीय श्वसन समाज को फोरम ले दर्शाता छ कि वायु प्रदूषण मधुमेह र उन्मादहरु लाई प्रजनन समस्याहरु र बचपन लेकिमिया को सबै केहि मा योगदान गर्दछ।
"गहिरो हावा" पनि अदृश्य हुन सक्छ। साईन इन्सलिंग वा कणग्रस्त पदार्थको साथ धुआन-प्रायः माइक्रोमेटिन्टहरू, PM10, PM2.5 र PM1-Blackens फेफड़ोंमा राखिएको हुन्छ र श्वसन र हृदय रोगको कारण र अस्थमा र क्यान्सर जस्ता रोगहरू हुन्छन्। केहि PM10 क्लाउडको रूपमा देखिने छ, र यो र पीएमएक्सएनमक्सले स्क्याटरिंग र लाइट अवशोषण गरेर दृश्यतालाई असर गर्छ, तर यसले यसलाई एक्सएक्सएनएमएक्सक्स र इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोप "ultrafines" हेर्नको लागि एक माइक्रोस्कोप लिन्छ। यो सानो कण, तपाईंको फेफड़ोंमा गहिराइ जाँच्नु, रसायनहरू सँगसँगै यो बनाइएको छ। यस प्रकारको वायु प्रदूषण अपूर्ण दहन (काठ र बिरुवाहरु साथै साथै जीवाश्म ईन्धन) बाट उत्पन्न हुन्छ; धूल; र कृषि सहित विभिन्न स्रोतहरु बाट अन्य प्रदूषण को संयोजन।
ओजोन, ट्रांसफॉर्मर, लैंडफाइल्स, कृषि और अन्य स्रोतों से अन्य प्रदूषण संयोजन के द्वारा बनाई गई एक गैस, अदृश्य है। यो योगदान गरियो 500,000 विश्वभरिका 2017 मा मृत्यु भएको छ, र धेरै 23 मा 2015 आपातकालीन कोठा भ्रमण। नाइट्रोजन डाइअक्साइडको एक्सपोजर (NO2), ओजोन के पूर्ववर्णियों में से एक है कि बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन दहन से आता है, सांस और हृदय हृदय रोग, साथ ही प्रजनन और विकासशील प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
वायु प्रदूषणले जलवायुलाई असर गर्छ
अक्सर अल्पकालिक वातावरण प्रदूषकहरु (SLCPs), कालो कार्बन (पीएम को एक घटक) भनिन्छ, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन र मेथेनन को मौसम को वायु प्रदूषण र वायु प्रदूषण दुवै मा योगदान गर्दछ। यस अनुसार जलवायु र स्वच्छ वायु गठबन्धन, यी तीन अत्यधिक शक्तिशाली प्रदूषकहरू अहिले ग्लोबल वार्मिंगको 30-40% को लागि जिम्मेवार छन्। तिनीहरू कार्बन डाइअक्साइड (CO2) लाई 1.5 डिग्री सी (2.7 डिग्री एफ) को ग्लोबल तापमान वृद्धि को सीमित र समुद्र स्तर वृद्धि र पानीको असुरक्षा जस्तै विनाशकारी जलवायु प्रभावहरु लाई रोक्न।
कालो कार्बन र ओजोन बस केहि दिन सम्म को लागि वातावरण मा रहन र केहि दशक सम्म सम्म मीथेन; यो 100 वर्ष भन्दा बढी ले CO को समाप्त गर्न को लागी लिन्छ2। यसको अर्थ SLCPs लाई कम गर्ने कार्यहरूले तिनीहरूको एकाग्रतामा लगभग तत्काल कटौती गर्न सक्छ, जलवायु र मानव स्वास्थ्यको फाइदा लिन सक्छ। महत्त्वपूर्ण रूपमा, केहि कणयुक्त पदार्थले सौर विकिरण रोक्नको लागी शीतलक प्रभाव पनि हुन सक्छ, तर विशेष गरी केहि चीजलाई कम गर्न सधैं स्वास्थ्य लाभ हुनेछ। निर्णयकर्ताहरूले SLCPs लाई कम गर्न रणनीतिहरू डिजाइन गर्दा यो अन्तरक्रियालाई विचार गर्नुपर्दछ।
वायु प्रदूषण पानी र मौसममा असर गर्छ
वर्षाको ढाँचाबाट मानसून तीव्रताहरूमा, वायु प्रदूषणले पानी चक्रलाई महत्त्वपूर्ण असर पार्न सक्छ। विभाजित मामलाले सौर विकिरणको मात्रा घटाउन सक्छ जुन पृथ्वीको सतहमा पुग्छ, रेटमा असर गर्दछ जुन पानी घटाउँछ र वातावरणमा चल्छ। तिनीहरू बादलहरूको गठन र पानी-लिने क्षमतालाई पनि असर गर्छन्।
उदाहरणको लागि, भारत र चीनमा वर्षाको तीव्रता र वितरणमा परिवर्तनहरू लिङ्क गरिएको छ कण पदार्थ प्रदूषण गर्न। केही क्षेत्र सामान्यतया भन्दा अधिक वर्षाको अनुभव गर्दछ, प्रायः फोकसहरूमा, जबकि अन्य कम अनुभव गर्दछ। विभाजनले पनि असर गर्छ प्रक्षेपण र तीव्रता एशिया मा मानसून को, र तीव्रता छ सूखे चीन, उत्तर अमेरिका र दक्षिण एशियामा। यूरोपीय र उत्तर अमेरिकी प्रदूषण प्रभाव पार्छ साउल र वर्षा। आकस्मिक पर्यवेक्षकलाई, यी प्रभावहरू सामान्य वातावरण परिवर्तनको साथ मिश्रण गर्न लाग्दछ, तर कृषि, जल जलाशय र जैव विविधतामा उनीहरूको प्रभाव महत्त्वपूर्ण छ।
वायु प्रदूषणले अमूल्य ऊर्जालाई असर गर्छ
महत्वपूर्ण कण पदार्थ प्रदूषण संग क्षेत्रहरुमा सौर ऊर्जा उत्पादन पनि गिरावट। सौर प्यानलमा टाढा टाढा टाढा समस्याको समस्या समाधान गर्न सक्छ, तर बाँकी धेरै जटिल छ: सनलाइट सौरमार्फत पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्न सक्दैन, सौर प्यानलको ऊर्जा उत्पादन घटाउन। अध्ययन भारत र चीनमा सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरूमा सम्भावित उपजको 25% सम्मको घाटा फेला पार्नुहोस्।
यो सौरमा निर्माताओं को तल रेखा मा काट सकते हो र शहरहरु र देशहरुको लागि प्रमुख प्रभावहरु हो जो कि नवीनीकरण को लागि त्वरित र लागत-प्रभावी संक्रमण को बढावा गर्न चाहते हो। कुल मिलाएर, प्रदूषण प्रति वर्ष चीनको 11 GW को बारेमा लागत महसुस हुन्छ, उदाहरणका लागि।
वायु प्रदूषणले खाद्य र तरकारीलाई असर गर्छ
ओजोनले बिरुवा कोशिकाहरूलाई हानिकारक बनाउन सक्छ र फोटोसिन्थेसलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जबकि कण पदार्थले सनलाइटको मात्रा घटाउन सक्छ जुन बिरुवा र खाद्य फसल पुग्छ। 2000 मा, वैश्विक उपज हानि ओजोनको कारण आजको मूल्यमा 79-121 मिलियन टन, वा $ 16-26 डलर डलरको लायक छ। यसमा एसिया र गेहूं को लागि 15% को उपज हानि, र मक्का को लागि 5% शामिल भयो। ओजोन वृद्धिको रूपमा, हानि पनि गर्छ। यस प्रकारको प्रदूषणले भारतमा खाद्यान्नको ठूलो क्षतिको कारणले गर्दा: 2000-2010 बाट, गेहूं, चावल र सोया फसलहरू प्रति वर्ष गुमाएका थिए। 94 लाख मान्छे। त्यो जर्मनीको लगभग सम्पूर्ण आबादी हो। समान समानहरू मेक्सिको माईको लागि 3% को अनुमानित उपज हानि देखाइयो, जामका लागि 26%, बीन्स र 14% sorghum को लागि%।
ओजोन र एसिड वर्षा (जुन सल्फेट र NO द्वारा बनाईएको छ2 प्रदूषण, मुख्यतः जीवाश्म ईन्धन जलिरहेको छ), यो अन्य प्रकारका वनस्पति, जंगल र यहाँ पनि प्रदूषणलाई असर गर्छ।
सफा हावा महत्वपूर्ण छ
यसको धेरै र विविध प्रभावहरू भ्रामक हुन सक्छ, हामी जान्दछ कि कसरी वायु प्रदूषण कम गर्न र हावा गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ। वायु प्रदूषण कम गर्नका फाइदाहरू प्रायः बढि खर्च बढ्दछ, र हावामा धेरै मानिसहरु भन्दा बढि सुधार गर्न सक्छ जब हामी हाम्रो दिमाग र स्रोतहरु लाई योमा राख्दछौं। यी कमेनिटेड तर राम्रो-दस्तावेजित लागतहरू केवल तीव्र कारणहरूसँग जोड्दछन् जुन हामीले छिटो र निर्णायक रूपमा हवाइजहाज गर्नुपर्छ।
हामी पहिल्यै समाधान देखिरहेका छौं हामी सबैबाट सिक्न सक्छौं। उदाहरणका लागि, विशेषज्ञहरू भन्छन् कि अहिले SLCPs कम गरेर, हामी 0.6 द्वारा 2050 डिग्री C को रूप मा धेरै नजिक ग्लोबल वार्मिंग मा वृद्धि धीमी हुन सक्छ। ग्लोबल आकलन उल्लेख गरिएको छ स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच, ट्राभल ईंधन सुधार, वाहन उत्सर्जन घटाउन र जीवाश्म ईन्धन उत्पादन र कृषिबाट मेथेन लीक नियन्त्रण गर्न यो लक्ष्य प्राप्त गर्न एक स्पष्ट एजेन्डा।
स्थानीय स्तरमा, हामीसँग पनि सिक्नका लागि सफलताहरू छन्। बीजिंगमा वायु प्रदूषण छ धेरै कम भयो अतीत 20 वर्षमा ऊर्जा दक्षता सुधार र वाहन र कोइला उत्सर्जनमा राम्रो नियन्त्रण गर्न धन्यवाद। मेक्सिको सिटीमा नियामक र विज्ञान समुदायहरू बीचको निगरानी, ​​राजनीतिक नवाचार र सहयोगको संयोजनले महानगरीय क्षेत्रको प्रदूषणको निदान गर्न र यसलाई 1990s बाट कम गर्न मद्दत गर्यो। अमेरिकी स्वच्छ वायु अधिनियमको लागि जिम्मेवार छ 22 द्वारा ओजोन को कम गरेर% र पीएम 2.5 द्वारा 40% 1990 र 2017 बीच, हवा प्रदूषण परिणाम को लागी महत्वपूर्ण स्वच्छ वायुमण्डल को लागी सतत प्रयासहरु को प्रदर्शन।
त्यसोभए प्रश्नले हामीलाई के रोक्छ? हामी हावा सफा गर्न सक्छौं, र हामीले यसमा सबैको ख्याल राख्नुपर्छ। सफा हावा एक स्वास्थ्य हो जसले हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो वातावरण, हाम्रो खाना सुरक्षा, र अधिक प्रभाव पार्छ। हामीले यसलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। यी विषयहरूमा चाँडै थप हेर्नुहोस्।
फोटो द्वारा ब्यानर फोटो अलिया अर्लङगा / CIFOR द्वारा